tezvara - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'tezvara'
tezvara mukwasha msuri
tezvara mukwasha ambuya kumusha
tezvara dofo mukwasha tsamba
tezvara mukadzi mukwasha murume baba
tezvara roora mukwasha tsamba bonus
tezvara hure mukwasha muroora
tezvara phone baba mukomana musikana
tezvara roora mukwasha mari nhamo
tezvara roora mukwasha ambuya whatsapp
tezvara mukwasha shona dzungu
kana usina bubvisa pfuma unoenda kudenga here?
Isaac: Munhu akafa asina kuroora (kubvisa pfuma) anoenda here kudenga?
Mike: Achiendepi iye akambotadza kuenda kwaatezvara.
tezvara roora denga
Tezvara vane mhanza
Ndanyara wena. Ndakagara nababa vemukadzi (tezvara) vane mhanza, kamwana kangu kane 3 years karikuvarova mhanza kachiti: "Iwe sekuru enda kunogerwa zvakanaka buda muno"
tezvara msikanzwa mwana mhanza/mhazha
Muroora akaresva kugara pana tezvara
Tezvara vachiona muroora akaresva kugara.
Tezvara vairodza banga ukuwo muroora akagara pachair achifurura mashizha emunhanga.
Tezvara pavakaona muroora akashaisha kugara,vakabva vaimba havo vachiti:"gara mushe Shedia muroora,gara mushe Shediaaa."
Muroora paakaona kuti ndiye ayiyimbwa, akabva atangawo kuimba achiti: "hotti property, nyatsocheka masettings, takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita hunhu hweghetto."
tezvara bhurugwa muroora zim dancehall ghetto
tezvara mukwasha whatsapp tsano
tezvara bhora Robert Mugabe Sally Mugabe Warriors Zimbabwe Mens Soccer team Ghana World Cup Qualifiers